Erling Braut Haaland Oo Tijaabada Caafimaadka U Maray Kooxda Manchester City
HomeWararka CiyaarahaErling Braut Haaland oo Tijaabada Caafimaadka u maray Kooxda Manchester City
Erling Braut Haaland ayaa lagu dhawaaqi doonaa inuu yahay ciyaaryahan Manchester City isbuucaan ka dib markii uu ku baasay tijaabada caafimaadka.
21-sano jirkaan oo la filayo inuu ka tago Borussia Dortmund xagaagan, ayaa la dhihi karaa waa weeraryahanka loogu doonista badan yahay Yurub, iyadoo Citizens la rumeysan yahay inay hogaamineyso tartanka saxiixiisa.
Sida laga soo xigtay saxafiga Fabrizio Romano , Haaland ayaa haatan ku sugan Dortmund halkaas oo uu ku maray tijaabada caafimaadka Isniintii, waxaana si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa u dhaqaaqidiisa Etihad Stadium todobaadkan.
Romano ayaa intaa ku daray in Man City ay ku wargalisay Dortmund inay dhaqaajin doonto qiimaha lagu burburin karo qandaraaska weeraryahanka ‘saacadaha soo socda’ kaasoo lagu qiimeeyo €60m (£51.4m) halkii markii hore la sheegay €75m (£64.2m).
Haaland ayaa la fahamsan yahay inuu riixay in heshiiska la dhameeyo usbuucan isagoo rabay inuu macsalaameeyo taageerayaasha Dortmund ka hor dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Romano waxa kale oo uu intaa ku daray in Haaland uu ogolaaday inuu qalinka ku duugo heshiis shan sanadood ah, isla markaana aanu qaadan doonin wax ka badan mushaharka ugu sarreeya ee City Kevin De Bruyne , kaasoo hadda jeebka ku shubta ku dhawaad ​​£375,000 todobaadkii.